Natiijadii u horeysay ee doorashada Somaliland oo la shaaciyey | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Natiijadii u horeysay ee doorashada Somaliland oo la shaaciyey
Waxaa goordhoweyd lagu dhawaaqay natiijadii ugu horeysay ee doorashada goleyaasha degaanka Somaliland, taas oo labo maalin ka hor ka bilaabatay dhamaan deegaanada Somaliland.
Komishanka doorashooyinak Somaliland ayaa si horudhac ah u shaaciyey natiijada ilaa shan kamid ah degmooyinka Somaliland, taasi oo lagu muujiyey sida ay u kala heleen saddexda xisbi ee ka jira Somaliland.
Waxaa la filayaa in Guddiga doorashooyinka ay shaaciyaan natiijooyin kale oo ku aadan doorashooyinkii qabsoomay Isniintii, midaasi oo lagu muujinayo sida xisbiyada uga kala guuleysteen Xildhibaannada golaha wakiilada iyo degaanka ee guud ahaan Somaliland.
Hoos ka eeg natiijada iyo sida ay u kala heleen xisbiyadu.
Natiijadii u horeysay ee doorashada Somaliland oo la shaaciyey was last modified: June 2nd, 2021 by Admin
Mid kamid ah garsoorayaashii ka qeyb galay dacwadii badda ee Somaaliya & Kenya oo geeriyooday